Dowladda Sacuudiga oo abaabushay isbaheysi melateri oo la dagaalama Xuutiyiinta Yemen – Radio Muqdisho
Boqortooyada Sacuudiga, ayaa ku dhawaaqday inay dhistay dalal isbaheysi ah oo ka qayb qaata weerarrada xagga cirka ah, ee Khamiista maanta ka bilowday dalka Yemen.
Warbixin ay soo saartay dowladda Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada Sucuudigu diyaarisay ilaa 10 dal, oo ka qayb qaata dagaal ka dhanka ah Xuuthiyiinta Yemen.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in dalalkaasi Shan ka mid ah yihiin dalalka Khaliijkam kuwaasoo kala ah, U.A.E., Qatar, Bahrain, Jordan iyo Sacuudiga. dowladaha Masar iyo Morocco, ayaa iyana qayb ka ah isbaheysigaasi.
Maraakiibta dagaal oo ay leedahay Masar, ayaa ku sii jeeda xeebaha dalka Yemen, si looga hortaggo in taageero xagga badda laga soo gaarsiiyo Xuuthiyiinta.
Dowladda Pakistan, ayaa ka fiirsaneysaa dalabka dowladda Sacuudiga, kaasoo ah inay ku soo biirto isbaheysiga ay garwadeenka ka tahay, ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta Yemen.
Dhinaca kale dowladda Turkiga, ayaa taageertay isbaheysiga uu garwadeenka ka yahay Sacuudiga. Turkiga waxa uu soo dhaweeyay in dagaal loo dhan yahay lala galo Xuutiyiinta Yemen.
Dowladda Sacuudiga waxay sheegtay inay burburisay diyaarado iyo Taangiyo, ay gacanta ku hayeen XuutuyiintaYemen, waxayna sheegtay inay ka hortagtay in dagaalka loo adeegsado.
Sacuudiga waxa kaloo uu sheegay inay burburiyeen Xarunta laga abaabulo weerarrada xagga cirka ah, ee Xuuthiyiintu ka wadaan dalka Yemen. xaruntaasi oo ku taallaa Magaalada Sanca.
Diyaaradaha Sacuudiga, ayaa qorshahoodu yahay in hawada dalka Yemen ay ka dhigaan mid ka caaggan duulimaadyada si loo hakiyo weerarada xagga cirka ah, ee Xuuthiyiinta ku qaadayan Dowladda Madaxweyne Abdu Rabu Mansour Hadi.
Sacuudiga, ayaa maraakiibta uga digay inay ku soo dhawaadaan xeebaha dalka Yemen, si aan loogu arag kuwo gurmad u fidinaya malleeshiyadka Shiicada Yemen ee Xuuthiyiinta.
Safaaradda Mareykanka ee Kampala oo ka digtay weeraro argagixiso oo ka dhaca dalka Uganda